ချယ်ရီမြေသို့ တမ်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Ethnic Groups » ချယ်ရီမြေသို့ တမ်းခြင်း	15
Posted by မစုဥာဏ် on Dec 1, 2014 in Ethnic Groups, Poetry | 15 comments
မှိုင်းညို့ ညို့ တောင်တန်း
ပါးအို့ နီနီ ယဉ်ယဉ်လေးလှ
ရိုးရာဓလေ့ နဲ့ရာဇ၀င်တွေ
ယမ်းငွေ့ တွေ ခြုံ လွမ်း
သိန်းပေါင်းချီတဲ့ Refugee တွေ
စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ ….မှန်း..မှန်းဆနေ။
(နိုဝင်ဘာ၊၂၀၁၁ တုန်းကရေးထားတဲ့ ကဗျာပါ။ လတ်တလော မှာ နမ့်ဆန်မြို့ နဲ့နမ့်ခမ်းမြို့အပါအ၀င် ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဆာဘက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာ တွေ ကြားရတော့ စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူတွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ)
kai says: USရဲ့ thanksgiving ပွဲပြီးပြီးသကာလ.. ဗမာတွေလည်း.. အာဏာရှင်တွေလည်း.. တိုင်းရင်းသားတွေကို.. လူထုကို.. တောင်းပန်/ကျေအေး.. ကျေးဇူးတင်ရက်တရက်.. လုပ်ဖို့လိုတယ်ထင်မိတယ်…
တိုင်းရင်းသားတွေ မြေပိုင်နက်.. ခတ်တည်တည်နဲ့.. ကျောက်တူး.. သယံဇာတထုတ်.. သွားနေ..
ပြီးတော့. မြေပိုင်ရှင်တွေကို. အသိအမှတ်လည်းမပြု..
ဟုတ်တော့နေ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: USရဲ့ thanksgiving ပွဲပြီးပြီးသကာလ.. ဟို ကျပ်မပြည့် မိန်းမကြီး က တောင်းပန် နေရတာ ကိုရော ပြောပါဦးလေ။
ဘာမှ မဆိုင် တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကလေး တွေ ကို တောင် မဆီမဆိုင် လက်ပံသား ဓားနဲ့ချိုင်။
Republican တွေထဲ ဒီ လို လူမျိုး တွေ များများ ရှိနေလား တောင် မသိ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဖြစ်ပျက်ပုံတွေကို ထင်ဟပ်နိုင်ပါပေ့
kyeemite says: .ချယ်ရီမြေ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအားလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရစေချင်ပါတယ်
.မဘသ လို အစွန်းရောက်မျိုးချစ်တွေကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့လည်းလိုတယ်
.တကယ့်စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံချစ်သူတွေဦးဆောင်နိုင်မှအားလုံးပြေလည်နိုင်ပေလိမ့်မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကချင်ဘက်က ရွေးကောက်ပွဲ အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် ရှောင်မယ် ဆိုလား။
ခိုင်လုံ တဲ့ သတင်းတော့ မဟုတ် ထင်ရဲ့။ ကကြီးမိုက် ရယ်
ကျွန်မ ထင်တာတော့ “ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ” ဆိုတာ နိုင်ငံရေးမှာ ကစားဖို့ ကျပ်မပြည့်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် တွေ ရဲ့ သေးသိမ်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှု လို့ ထင်ပါတယ်။
ရိုးရိုးသာမာန်အနေ နဲ့ ဘာများ ထူးပြီး ဂုဏ်ဝင့်စရာလိုလို့လဲ။
သူတို့မလဲ မီးမရ။ ကိုယ့်မလဲ မီးပျက်။
အားလုံး အတူတူ ပါဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
မစုဥာဏ် says: “ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ” ကို ဗမာလူမျိုးတိုင်း မကျင့်သုံးသော်လည်း ….
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်လောက်၊ ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခံရ။
မိမိပိုင် နယ်မြေပေါ်က မောင်းထုတ်ခံရ၊ စာပေ ယာဉ်ကျေးမှုတွေ ဖျက်စီးခံရနဲ့ ၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မနေရပဲ.. စစ်ဘေးပြေးနေရတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ အများစုစိတ်ထဲမှာ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ပြီး၊ ဗမာလူမျိုးတွေပေါ် အမြင်မကြည်လင်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေး အောင်မြင်မှုတစ်ခုပေါ့ ။
အမေရိကန်လို ထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေမှာတောင် လူဖြူ၊၊ လူမည်းခွဲခြားမှု က အနည်းနဲ့ အများရှိနေဆဲပါ။
ခင်ဇော် says: ချယ်ရီတွေ မရှိတော့ဘူး အမရဲ့။
မီးရှို့ပြီးပြီး ကြက်ဆူတွေ စိုက်ပစ်ခဲ့ကြပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ငါ့ဗဇက်ထဲ ရောက်ခါနီး ငါးကြော်တုံးဂျီး လုယူသွားဒဲ့ နင်ဂို တသပ်မကြေ…
မစုဥာဏ် says: ဦးကြောင်ကြီး ပြောမှ ငါးကြော်ကပို စားလို့ ကောင်းလာသလိုလိုပဲး)
kyeemite says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: တနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပါ
aye.kk says: မေတ္တာတရားတွေခြောက်ခမ်း
ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သူတွေ တစ်နေ့ တော့ဝဋ်လည်ကြမှာ အမှန်ပဲလေ။
ကန္နားစီး မိဂီ says: ချယ်ရီမြေလား ….
ကျနော် ထွက်လာတာ အရမ်းကြာသွားလို့ ဗမာစာ မစားရဘူးလေ…
ယာမဇာကုရ ခေါ်တဲ့ ချယ်ရီတမျိုးက လက်ဖက်နံ့ နံသဗျ…
ကျုပ်မှာ လက်ဖက်သုတ် စားချင်လို့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်….
အန်းနီးဝေး …. ကျနော် ဆာကူရာကို ချစ်ပါသေးတယ်…
ဧပြီဆို …. သူနဲ့ပြန်တွေ့မယ်…
ဒချိ ဒချိ မယ်..
Ma Ma says: ပခုံးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းပေါက်ပြီး မတ်မတ်သွားနိုင်တဲ့ လူသားတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရပြီး ငြိမ်းချမ်းကြစေချင်ပါတယ်။
Mr. MarGa says: ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်
တိုင်းရင်းသားလို့ ပြောလိုက်ရင် ဗမာကို မေ့မေ့သွားတယ်….
ဒါလည်း brainwash ထဲ ထည့်ရမယ်ထင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.